Amafreyimu wewindi nawomnyango BVL - Trabia - Palermo
Izisombululo ezintsha zamawindi neminyango yekhaya lakho
Amafreyimu wewindi nawomnyango BVL eTrabia ePalermo ku-SS 113 snc km 1.228 kukhethekile ukulungiswa, amawindi nokusebenza kwensimbi. Kungenzeka ukuthola izixazululo eziningi ezintsha nezinobuchwepheshe obuphambili nezobuchwepheshe.
Amafreyimu wewindi nawomnyango iBVL eTrabia - Kwenziwe ukukala ozimele wewindi
Enye yamandla enkampani I-BVL yeTrabia (Palermo) ku-SS 113 snc km 1,228 kungenzeka ukuthi ucele futhi usebenzise ukulungiswa okwenziwe ngokwezifiso ezivumelanisa ngokuphelele nezidingo zobuchwepheshe nokunikeza ikhaya lakho. Ukuhlinzekwa kwe Amawindi we-Palermo BVL ngumlingani omuhle kakhulu ongathintana naye.
Amafreyimu wewindi nawomnyango iBVL eTrabia - Ukulungiswa kwewindows
Uma udinga ukungenelela kwe ukulungisa iwindi okusebenzayo ungaxhumana nochwepheshe benkampani I-BVL kuma-SS 113 snc km 1,228 eTrabia, esifundazweni sasePalermo abazenza ngobungcweti nangejubane ukulungisa iwindi endlunkulu yamakhasimende ethu.
Amafreyimu wewindi nawomnyango iBVL eTrabia - Ironwork
I umsebenzi wensimbi yenziwe yinkampani I-BVL etholakala eTrabia (Palermo) kuma-SS 113 snc km 1,228 izixazululo ezinokwethenjelwa nenhle ezenziwe ngabamnyama abanolwazi olude emkhakheni. THE umsebenzi wensimbi I-BVL ijwayela izidingo zombili zasekhaya, ezentengiso nezimboni.
Amafreyimu wewindi nawomnyango iBVL eTrabia - Ukuncishiswa Kwentela
Ukuba namawindows asezingeni eliphezulu nokulungiswa kusho ukuba nokuphawuleka ukonga amandla ekusetshenzisweni kokubonga ikhaya lakho ekusebenzeni okuphezulu ngokwemibandela yokuhlakazeka okushisayo nokuzwakalayo. Ngaphezu kwalokho, sibonga ikhono nobuchwepheshe be I-BVL yaseTrabia, esifundazweni sasePalermo, etholakala kuma-SS 113 snc km 1,228 ungangena ezibalulekile ukuncishiswa kwentela esikhundleni samafasitela neminyango ekhaya lakho.
Ikheli: I-SS113 snc Km 1,228
I-POSTAL CODE: 90019
Ucingo: 091 8146855
Umakhala ekhukhwini: 380 6961187 La Barbera
Umakhala ekhukhwini: 331 7078892 Vassallo
Iwebhusayithi: www., ngingenicus.com
Inombolo ye-VAT: 06407060828
Kufanele ngenze iwindi ngivule ama-vasistas ngingathanda vs ngiyabonga